Otu esi etinye Nvidia 495.xx ọkwọ ụgbọ ala na Fedora 35 - LinuxCapable
Saturday, January 22, 2022 Wednesday, November 3, 2021 by Jọshụa James
Part 1. Wụnye ndabere & Hazie
Nkebi 2. Wụnye Nvidia Beta 495.xx Drivers
Nkebi 3. Kwenye nwụnye Beta Drivers
Nkuzi na-esonụ ga-akụziri gị Otu esi etinye Nvidia Beta Graphic ọkwọ ụgbọ ala kacha ọhụrụ maka Fedora 35.
Nkuzi a na-eji nrụnye ọkọlọtọ ngwaahịa nke Fedora 35 & GNOME 41 desktọpụ. Nke a nwere ike ọ gaghị arụ ọrụ maka ndị ọrụ nwere njikwa ngosi ọzọ ma ọ bụ gburugburu desktọpụ, yabụ gbaa mbọ kwado faịlụ ọ bụla dị mkpa tupu ịmalite.
Ugbu a, ndị ọkwọ ụgbọ ala Nvidia 495 ka nọ na beta ma ha abanyeghị na ebe nchekwa ọ bụla ma ọ bụ PPA n'oge ugbu a. Agbanyeghị, maka ndị na-anụ ọkụ n'obi ga-achọ ịwụnye ndị ọkwọ ụgbọ ala beta ma jiri aka ha mee ka ha dị ọhụrụ, usoro ndị a ga-enyere gị aka imezu ebumnuche a.
N'oge nkuzi a, ewepụtara ụdị Beta 495.29.05 na 14th nke Ọktoba 2021.
A tọhapụrụ alaka ọhụrụ Nvidia 495.44 na 26th nke Ọktoba 2021.
Biko hụ na ị nwetara njikọ emelitere na BETA. ma ọ bụ ụdị NFB
Ụdị Y wee pịa Tinye igodo ịga n'ihu na nwụnye.
Na-esote, megharịa ihe kernel initramfs:
Ugbu a, malitegharịa na multi-onye ọrụ na-agba ọsọ larịị. Nke a ga-ewepụ onye ọrụ GUI ka ọ malitegharịrị:
Ngwa ngwa mbụ ga-ajụ maka ikwe ka DKMS wuo modul ọhụrụ na-akpaghị aka ma ọ bụrụ na ị wụnye ma ọ bụ kwalite modul ọhụrụ. Ka emechara, a na-adụ ọdụ ka ịhọrọ Ee ọ gwụla ma ị nwere obi ike ime ya n'onwe gị.
Họrọ wee pịa "Tinye igodo" na "Gaa n'ihu nwụnye" nhọrọ ka ịga n'ihu na nrụnye.
Ọ bụrụ na ị chọrọ ịwụnye 32-bit ndakọrịta, họrọ Ee or Mba ka ịga n'ihu na nhọrọ nwụnye ngwa ngwa na-esonụ.
Ọzọ, ị ga-enweta ngwa ngwa ọzọ na-arịọ ka idobe ntọala ndabara; nhọrọ akwadoro maka nrụnye ọhụrụ ga-abụ Ee.
Otu ngwa ngwa ikpeazụ ga-apụta na-agwa gị na ị wụnyela ngwugwu Nvidia Drivers nke ọma.
Ozugbo edobere UI eserese, malitegharịa:
Nhọrọ, mepee nke gị Nvidia X Server GUI iji kwado ụdị nrụpụta onye ọkwọ ụgbọ ala.
Ekele, ị wụnyela Nvidia Beta Drivers ọhụrụ. Echefula ịnọgide na-enyocha ngwungwu emelitere site na njikọ nbudata. Ọ bụrụ na ndị ọkwọ ụgbọ ala beta ọhụrụ pụta, ị ga-eme otu usoro ahụ ugboro ugboro iji wụnye ndị ọkwọ ụgbọ ala karịa ndị dị adị.
Otu esi etinye Nvidia 495.xx ọkwọ ụgbọ ala na Debian 11 Bullseye
Wụnye ndị ọkwọ ụgbọ ala NVIDIA na Fedora 35
Wụnye ndị ọkwọ ụgbọ ala NVIDIA na CentOS 8 Stream
Categories Fedora Tags Fedora 35, Nvidia Mail igodo